100 Muwadiniin Soomaali ah oo dalka dib loogu soo celiyay – WARSOOR
100 Muwadiniin Soomaali ah oo dalka dib loogu soo celiyay
Muqdisho – (warsoor) – Boqol dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku xanibnaa dalka Libiya ayaa lagu guuleystay in dalkooda Hooyo dib loogu soo celiyay, waxaana howshan is ka kaashaday dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka Socdaalka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IOM.
Muwaadintiintan dalka dib loogu soo celiyay oo tiradoodu ahayd 100, qof ayaa 60 ka mid ah waxaa la geeyay magaalada Hargeysa, halka inta kale ay ka soo degeen magaalada Muqdisho.
Dhallinyarada oo dalka Libya tahriib ku tagay, ayaa waddankaasi dhibaato badan kala kulmay, qaarkood illaa 2-3 sano waxay gacanta ugu jireen kooxaha dadka ka ganacsada ee Magafe loo yaqaan.
Soo celinta dhallinyarada waxaa si wada jir ah iskaga kaashaday Ergeyga gaarka ee Xafiiska Ra’isul Wasaarada, Wasaaradda arrimaha dibadda iyo Safaaradda Soomaaliya ee Libiya.
Danjire. Maryan Yaasiin Ergeyga gaarka ee Xakuumadda u qaabilsan xaquuqda Tahriibayaasha ayaa sheegtay inay qorsheynayaan sidii inta hartay ay dib u heli lahaayeen xoriyaddooda, ayna ka shaqeynayaan xillli kasta sidii loo ilaalin lahaa xaquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed meelkasta oo ay dunida ka joogaan.
Danjire Maryan ayaa xustay shaqada hufan oo ah qanbeen mudane Sadaam Garaad oo Xafiiskeeda ka mid ah iyo sii hayaha Safaaradda Soomaaliya ee Tripoli Mudane Ibraahim Axmed Nuur oo si wanaagsan shaqada u wado maalin walba.
Mas’uuliyiin iyo Xildhibaanno ka tirsan dowladda ayaa soo dhaweeyay dhallinyaradaan dalka dib loogu soo celiyay.